Bouling 757-200 FSX & P3D HOT
Fantatrao ve fa manana ny fiaramanidina manokana azy i Donald Trump? Izy io dia natao tamin'ny Boeing 757-200 miaraka amin'ny anatiny anatiny.
Azo atao izao ny fifehezana an'io jet io ao amin'ny simulator sidinao anao noho ny Rikoooo, dia misy ny panel 2D (efijery midadasika), VC fototra, FMC, GPWS, Ground Services, Auto-land (auto-land mine) Ny fiaramanidina irery miaraka amin'ny ILS, jereo ny antontan-taratasy), toa manokana amin'ny Rolls-Royce, famonoana feno, ny fiampangana TRUMP dia mitovy tanteraka amin'ny tany am-boalohany ary noforonin'i Rikoooo.
Ny tsiranoka virtoaly dia tena fototra, ka izay no antony tokony hamoahana io fiaramanidina io avy amin'ny (dikanteny) 2D Panel natsangana tamin'ny XML nataon'i G Munro.
Anatiny ao amin'ny Boeing 757-200 amin'ny horonantsary
Nohavaozina taminy 02 / 06 / 2020: Modely vaovao amin'ny 757-200 namboarin'i TDS (izay misolo ny P757KY XNUMX), izay ahitana sary mamolavola sy serivisy tany, rafitra jiro vaovao, haino aman-jery TRUMP vaovao amin'ny HD noforonin'i Rikoooo. Mifanaraka amin'izao Prepar3D v4 sy v5. Ity fiaramanidina ity dia tsy maintsy hasiana fiaramanidina amin'ny mode 2D Panel na dia misy VC fototra aza. Vonona amin'ny GSX.
Downloads 38 687
757-200 modely nosoratan'i TDS, TRUMP repaint nataon'i Erik BENDER (Rikoooo.com), 2D Panel avy amin'ny panel G Munro, feo 757 nataon'i Adam Murphy